Ochie Mac echiche na CURVED / labs Technology ugbu a | Esi m mac
Ochie Mac echiche ochie na Teknụzụ CURVED / labs
Ọ bụrụ na ị na-ala azụ mgbe anyị hụrụ ụfọdụ echiche nke ndi okike kere dika ihe ha gha, anyị na-ada. N'ọtụtụ oge mgbe anyị na-ele vidio ahụ, anyị ga-eche na atụmatụ ndị a agaghị akwụsị ịbụ eziokwu n'ihi ịrụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna ụgwọ, mana n'ọnọdụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwe nro ahụ na otu ụbọchị, echiche ndị a ga-erute usoro mmepụta nke ụfọdụ ụlọ ọrụ.
Oge a anyị nwere ọtụtụ ochie Macs echiche kere site / labs na ị ka mma ịhụ ha na anya gị iji nweta uche banyere ha imewe. N'ezie na ikpe ndị a ọ kacha mma ilele vidio ahụ ma hapụ ndị ọzọ.
Nke a bụ vidiyo nke ha gosiri anyị atụmatụ ndị Curved kere:
Ọbụna ndị a eMac 2016 nwere nkọwa ha onwe ha:
Edición de EMAC en colores plata, gris espacio, oro y rosa aluminio anodizado oro. N'ihu nke en blanco o negro y manzana iluminada
Atụmatụ ndị a ga-amasị ihe karịrị otu n'ime ndị bịara ya. O doro anya na ọ bụ ihe na anyị ekweghị na a ga-ere ahịa, ma atụmatụ ndị a dị ezigbo mma. Ndị fọdụrụ nke ozi, ọzọ oyiyi na nkọwa nke ndị a eMac, ị ga-ahụ na ha na website nke Na-atụgharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ochie Mac echiche ochie na Teknụzụ CURVED / labs
Apple ekweisi ekweisi na mfe ịgbanwee site na Wired na wireless
Opera maka ndị mmepe na - agbakwunye atụmatụ njirimara nkeonwe (VPN)